Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo inuu booqdo Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo inuu booqdo Dhuusamareeb
A warsame 22 March 2015 22 March 2015
Mareeg.com: Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa inuu booqasho ku tago magaalada Dhuusomareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, sida uu sheegay guddoomiye Kuxigeenka degmada Dhuusomareeb C/llaahi Macalin Axmed.
Gudoomoye ku xigeenka ayaa sheegay in ujeedka socdaalka Guddoomiyaha Baarlamaanka uu yahay sidii uu u Kormeeri lahaa qaabka uu u soconayo shirka dib u heshiisiinta ee ka soconaya Magaalada Dhuusamareeb.
C/llaahi Macalin Axmed ma sheegin xilliga Jawaari tegayo Dhuusamareeb, wuxuuse xusay iney iyagu u diyaar garoobeen soo dhaweyntiisa, islamarkaana amaanka la adkeeyey.
Magaalada Dhuusamareeb oo uu ka soconayo shirka dib u heshiisiinta ayaa ayaa waxaa horay booqasho ugu tagay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake.
Koox Alshabaab ah oo ay dishay miino ay aasayeen duleedka Bardaale ee gobolka Baay
Jabhadaha Kacdoonka Suuriya oo soo riday diyaarad uu leeyahay nidaamka Bashaar Alasad (Sawirro)